အဆိုပါထိန်းထရံဘိန်း-Karakuyu လိုင်းတင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း Split ဖြိုဖျက် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုအဆိုပါထိန်းထရံဘိန်း-Karakuyu လိုင်းတင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း Split ဖြိုဖျက်
21 / 08 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
ဘိန်းဘုရင် The Opium-Karakuyu လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: + 35 920 36-250 + ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း Split အကြားထရံကိုဖြိုဖျက်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး7။ ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (TCDD) 2019 / 248779 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 555.437 TL နှင့်-Karakuyu olanafyo လိုင်းမိုင်အကွာအဝေးနှုန်း 814.493,84 အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်: 35 + 920-36 + 250 ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အကြားအလုပ်အကိုင်အနူးညံ့ 49 ကုမ္ပဏီများမှပူဇော်သောနံရံ Split လုပ်ခြင်းဖြိုဖျက်နှင့်စာချုပ် 557.955,85 TL ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ် abstraction တည်ဆောက်နေ & စာချုပ်အဆိုပြုချက်ကို TRADE ကို Tours, LTD ရယူလိုက်သည်။ နုလေလံပါဝင် 18 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, mxnumx တူးဖော် 41275,21,3396,3ကီလိုမီတာအသံအတိုးအကျယ်တွက်ချက်မှုအလုပ်အကိုင်ဖယ်ရှားရေးကပါဝင်ပတ်သက် mxnumx ကွန်ကရစ်ထိန်းမြို့ရိုးကိုဖြိုဖျက် mxnumx ။ ပေးပို့အလုပ် 1012,5 (တရာ) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘိန်း-Karakuyu အဆိုပါထိန်းရိုးလိုင်း Split လုပ်ခြင်းဖြိုဖျက် 27 / 05 / 2019 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)7အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြု TC လိုင်း Split အတွက်ဖြိုဖျက်ဆက်ပြီးနံရံဘိန်း-Karakuyu ။ ဒေသန္တရရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL ဆားဗစ်မန်နေဂျာ Afyon-Karakuyu လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: မြို့ရိုးအ Split ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အကြား 35 + 920-36 + 250 ပြုသောအမှုဖြိုဖျက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 248779 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ Silom လမ်း CAD ။ အမှတ်2/ 1 03030 AFYONKARAHİSARဗဟို STATION ကို / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621-4411 - 2722141943 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr ​​...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Sudurağıဘူတာကိုလယ်ကွန်ကရစ်, အမှတ်တရ,4အပို discharge ဧရိယာ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖြည့်တပ်ဆင်ခတူးဖော်မှုဆက်ပြီး။ နုလမ်းရှင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ Lighting ထိန်းသိမ်းခြင်း 31 / 10 / 2012 တူးဖော်အလုပ်မှာ, အပိုဆောင်း4ဖွညျ့ပါ။ လမ်းခရီးတစ်ခါသုံးမီးဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ TCDD6အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒေသန္တရရုံးSudurağıဘူတာကိုလယ်ကွန်ကရစ်, အမှတ်တရ, installation ကိုတူးဖော်မှုဖြချဧရိယာ, အပိုဆောင်း4Creating ဆီသို့အလုပ်လုပ်ဆက်ပြီး။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ထိနျးသိမျးလမ်းရှင်းလုပ်ငန်းများနဲ့အလင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 152691 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: လွတ်မြောက်ရေးရပ်ကွက်Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224575354 - 3225475807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ...
အမှတ်တရဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်ဆက်ပြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲက Irmak-Zonguldak လိုင်း 49 26 / 07 / 2018 Irmak - Zonguldak လိုင်း 49 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစက်ရုံပြင်ပကီလိုမီတာ 409 + 215 - ကီလိုမီတာ 409 + 330 တစ်ဦးထိန်းသောမြို့ရိုးနှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2018 / 345415 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 149.064,58 TL နှင့် 204.250,78 TL အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် Irmak အတူ - Zonguldak လိုင်း 49 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစက်ရုံပြင်ပကီလိုမီတာ 409 + 215 - ကီလိုမီတာ 409 + 330 တစ်ဦးထိန်းသောမြို့ရိုးများနှင့်လေလံသံတည်ဆောက်နေလျင်3ပေးရ 157.599,90 ကုမ္ပဏီများမှဆိုရင် single နှင့်ချက်ပြုတ်နုမှဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တင်ဒါတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် - Ali သံကုမ္ပဏီရရှိထားပြီးပါပြီ။ အားလုံးပုံစံဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်တင်ဒါ (Box ကို Girder နှင့် ...
အမှတ်တရ,4အပို discharge ဧရိယာ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖြည့်တပ်ဆင်ခတူးဖော်မှုဆက်ပြီးSudurağıဘူတာကိုလယ်ကွန်ကရစ်။ လမ်း၏စွန့် Making နဲ့အလင်းအလုပ်လုပ်တင်ဒါကောက်ချက်ချ 04 / 03 / 2013 အမှတ်တရ, 2012 အပို discharge ဧရိယာ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖြည့်တပ်ဆင်ခတူးဖော်မှုဆက်ပြီး 152691 /4တင်ဒါအမှတ်Sudurağıဘူတာကိုလယ်ကွန်ကရစ်။ ရှင်းနဲ့အလင်းအလုပ်လုပ်တင်ဒါsonuçlandı.yaklaşıkကုန်ကျစရိတ်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းများ: £ 1.030.140,04 ကမ်းလှမ်းမှုကို TUANA CAN သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတည်ဆောက်နေအစားအစာစိုက်ပျိုးရေး Automotive ရေနံတင်ပို့မှု Export စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ LIMITED Won နှင့်အတူ။ Loading discharge ဧရိယာ၏တည်ထောင်ကွန်ကရစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ရိုးSudurağı STATION ကို FIELD ... : 1) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးက) နေ့စွဲ: 07.11.2012 ခ) ရိုက်ထည့်ပါ: ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်က c) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: ပွင့်လင်းဃ) ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်: 1.030.140,04 £ 2) ကိုတင်ဒါဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ဘာသာရပ်တစ်ခု) အမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖန်ဆင်းနံရံနဲ့ trapezoidal လိုင်းများဆက်ပြီး 15 / 06 / 2015 ဆက်ပြီးမြို့ရိုး, trapezoidal လိုင်းများ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အလုပ် 426 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 200 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေး 426 မီတာထိန်းနံရံနဲ့ trapezoidal channel များကိုကြားဒေသဆိုင်ရာအစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး MALATYA DİYARBAKIR LINE KM 300 + 100-4734 + 19 ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 72909 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း ...
ဘိန်းဘုရင် The Opium-Karakuyu လိုင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘိန်း-Karakuyu အဆိုပါထိန်းရိုးလိုင်း Split လုပ်ခြင်းဖြိုဖျက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Sudurağıဘူတာကိုလယ်ကွန်ကရစ်, အမှတ်တရ,4အပို discharge ဧရိယာ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖြည့်တပ်ဆင်ခတူးဖော်မှုဆက်ပြီး။ နုလမ်းရှင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ Lighting ထိန်းသိမ်းခြင်း
အမှတ်တရ,4အပို discharge ဧရိယာ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖြည့်တပ်ဆင်ခတူးဖော်မှုဆက်ပြီးSudurağıဘူတာကိုလယ်ကွန်ကရစ်။ လမ်း၏စွန့် Making နဲ့အလင်းအလုပ်လုပ်တင်ဒါကောက်ချက်ချ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Fields ဧည့် Adana ဘူတာနှင့်အိမ်ရာဧရိယာပြုလုပ်ခြင်းဟာထိန်းသောမြို့ရိုး
ဘိန်းဘုရင် The Opium - စီမံကိန်းတင်ဒါများအတွက် Karakuyu လိုင်းအပိုင်းရလဒ်များ JCC မှကန့်ကွက်ပယ်ချခံခဲ့ရ